Htike Aung – Eleven Media Group
Author: Htike Aung
One Village One TV of YINGOS Charity’s
Posted on October 10, 2018 October 11, 2018 by Htike Aung
Yunnan International Non-Government Organization Society (YINGOS) donated TV with the plan of donation TV to each village; they have donated total 120 villages in Shan State which is very unique.
They donated TV as well as solar, Skynet satellite with3year services for the rural people to get easily the external information. In this donation Shwe Than Lwin family also supported.
YINGOS organisation was legally established in Yunnan Province in 1993.They aim to “Care the Weak to Change”, they have implemented 8 charity projects in Myanmar since 2014, which included“Health promotion project in Muse”, “One Village One TV project”, and “Safe Drinking Water project” in Muse Shan State.
Without neglecting the health of rural children, YINGOS have performed as follow; reforming the environment of the hospital and changing medical needs. To be able to drink safety water in school compound YINGOS also donatedawater purifier.
The origination also helped to promote the health of people in Muse city, by collaboration with Muse city of Health department, Material and child development center. It wasagoal of YINGOS.
In addition, according to the plan of “One TV One Monastic Education School” project in Yangon, they have donated total 234 TV to each monastic education schools it is included one TV, Skynet with3year services and it collaborated with Yangon Nobel Language Center. YINGOS always show respect and kind to Myanmar nuns, monk and orphan school.
YINGOS also donated the total amount of (200,000 Yuan) to the villager for the new construction of industrial and trade association asahelp for industrial promotion. Donated TV, Satellite, Video recorder, voltage stabiliser, books, book shelf, newspaper shelf, and table to the rural libraries, and also provideatraining section to the villager for upgrade the agricultural sector, and promote manufacturing with high technology.
YINGOS plan to have different charities to perform in the future. It will continue their Philanthropic journey, and base on the needs of Myanmar People.
Posted in yingosLeaveaComment on One Village One TV of YINGOS Charity’s
ဟင်္သာတ-ဇလွန် ကားလမ်းနံဘေး၌ ရေမြောင်းထဲထိုးကျ တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် ယာဉ်နှစ်စီးပေါ်မှ တရားမ၀င်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on August 7, 2017 August 7, 2017 by Htike Aung
ဟင်္သာတ-ဇလွန် ကားလမ်းနံဘေး၌ ရေမြောင်းထဲထိုးကျ တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် ယာဉ်နှစ်စီးပေါ်မှ တရားမ၀င်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ် ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဒေါင့်ကြီးကွေ့အလွန်၌ အိမ်စီးကားတစ်စီး၊ လှည်းလမ်းတက် မူလတန်းကျောင်းအနီး၌ ခြောက်ဘီးကားတစ်စီး လမ်းဘေးထိုးကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ထိုသို့တရားမ၀င်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အိမ်စီးကား လမ်းဘေးထိုးကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဒေါင့်ကြီးကွေ့အလွန် ဒေါင်းစုအလွန်လေးနားမှာဖြစ်တာပါ။ ကားရှေ့ပိုင်းနားမှာ မီးလောင်ထားတာလည်း တွေ့တယ်။ ကားပေါ်မှာ ကျွန်းတံခါးဆိုက်စုံ တင်လာတာ တွေ့ရတယ်။ လှည်းလမ်းတက်ဘက်မှာလည်း သစ်တင်လာတဲ့ ခြောက်ဘီးကားတစ်စီး လမ်းဘေးထိုးကျမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကားပေါ်မှာလည်း ပျဉ်းကတိုးသားတွေ ပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ သစ်တောအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး စစ်ဆေးထားပါတယ်။ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်အရေးယူနိုင်ဖို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ဒူးယားနယ်မြေ ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်အောင်စိန်ညွန့်က ဆိုသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုအား တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဒေါင့်ကြီးကွေ့အလွန်၌ တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် အိမ်စီးကားပေါ်တွင် ကျွန်းတံခါးဘောင်များ တင်ဆောင်လာသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လှည်းလမ်းတက် မူလတန်းကျောင်းအနီး တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် ခြောက်ဘီးကားပေါ်၌လည်း ပျဉ်းကတိုးသစ်များကို လမ်းခင်းကျောက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်တင်ဆောင်လာသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Writer : အောင်ကျော်မျိုး
Posted in NewsLeaveaComment on ဟင်္သာတ-ဇလွန် ကားလမ်းနံဘေး၌ ရေမြောင်းထဲထိုးကျ တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် ယာဉ်နှစ်စီးပေါ်မှ တရားမ၀င်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ
သိမ်ဇရပ်ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ဝန်ခုနစ်လခန့်ရှိ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် သိမ်ဇရပ်ကျေးရွာတွင် သြဂုတ် ၅ ရက် ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်က ကိုယ်ဝန်ခုနစ်လခန့်ရှိ အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ သတင်းအရ သိမ်ဇရပ်နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ရဲစခန်းမှ တင်အောင်စိုးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ သိမ်ဇရပ်ကျေးရွာ ရွာလေးရပ်ကွက် (၃) လမ်းနေ မဂျူးဂျူး ၁၇ နှစ် (ဘ) ဦးလင်းအောင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအား နေအိမ်အောက်ထပ် အမြင့်ရှစ်ပေခန့်ရှိ ရက်မတန်းတွင် အရှည် ၁၀ ပေ၊ လုံးပတ် သုံးမူးခန့်ရှိ နိုင်လွန်ကြိုးဖြင့် ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ သေဆုံးသူ မဂျူးဂျူးသည် ၂၀၁၆ ခု နှစ်အတွင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နေ ရဲရင့် ၂၀ နှစ် (ဘ) ဦးစိုးဝင်းသန်းနှင့် လက်ထပ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ (၂၀၁၇) ခုနှစ် မေလတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများကာ ပေါင်းသင်းခြင်း မပြုတော့ဘဲ သိမ်ဇရပ်ကျေးရွာသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေထိုင်စဉ် မွေးလာမည့်ကလေးအား ရယူလိုခြင်းမရှိကြောင်း၊ စိတ်ညစ်ကြောင်း၊ မကြာခဏပြောဆိုတတ်ပြီး သြဂုတ် ၅ ရက် ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ ခန့်က ၎င်း၏ခုတင်အနီး၌ ဆွဲကြိုးချသေဆုံးနေသည်ကို အဘိုးဖြစ်သူ ဦးမြင့်အောင်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါ မဂျူးဂျူး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိမ်ဇရပ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင် သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၇) ရေးဖွင့်၍ ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
Writer : ဘိုဘိုမြင့်
Posted in CrimeLeaveaComment on သိမ်ဇရပ်ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ဝန်ခုနစ်လခန့်ရှိ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
မြန်​မာ-ထိုင်းနယ်​စပ်​ မြ၀တီမြို့မှ ​ဒေသခံပြည်​သူအချို့ ထိုင်းနိုင်​ငံ မဲ​ဆောက်​ဘက်​သို့ ရာသီတုပ်​​ကွေး A(H1N1) ကာကွယ်​​ဆေး သွား​ရောက်​ထိုးသူ များပြားခဲ့သလို အလှူရှင်​များက အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ ​ဆေးရုံမှမှာယူပြီး မြ၀တီမြို့တွင် ကာကွယ်​​ဆေးထိုး​ပေးနေ
မူလွန်​မဲ့ပလဲ့ကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအား ကာကွယ်​​ဆေးထိုး​ပေးနေစ​ဉ်​
မြန်​မာ-ထိုင်းနယ်​စပ်​ မြ၀တီမြို့မှ ​ဒေသခံပြည်​သူအချို့ ထိုင်းနိုင်​ငံမဲ​ဆောက်​ဘက်​သို့ရာ သီတုပ်​​ကွေး A(H1N1) ကာကွယ်​​ဆေး သွား​ရောက်​ထိုးသူ များပြားခဲ့သလို အလှူရှင်​များက အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ ​ဆေးရုံမှမှာယူပြီး မြ၀တီမြို့တွင်​ သြဂုတ်​ ၇ ရက်​​က ကာကွယ်​​ဆေးထိုး​ပေးမှုများရှိ​ကြောင်း သိရသည်​။
နယ်​ခြား​စောင့်​တပ်​ တပ်​နယ်​ ၃ မှ ဗိုလ်မှူးနိုင်မောင်ဇော်က ​လှူဒါန်း​သော H1N1 ရာသီတုပ်​​ကွေးကာကွယ်​​ဆေး အလုံး (၁၅၀) ကို ခရိုင်​ကျန်းမာ​ရေးဦးစီးဌာန၊ မြ၀တီ​​ဆေးရုံအုပ်​ကြီး ​ဒေါက်​တာသီတာစိုး၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်​အညီ ကျန်းမာ​ရေးဆရာ၊ ဆရာမများက ပညာ​ရေးနှင့်​ ကျန်းမာရေးဝန်​ထမ်းများအား ကာကွယ်​​​ဆေးထိုး​ပေးခြင်းဖြစ်သည်​။
ထို့အတူ အလှူရှင်​များ ထပ်​မံပေါ်ပေါက်​၍ ကာကွယ်​​ဆေးများ ထပ်​မံရရှိလာမည်​ဆိုလျှင်​ ပြည်​သူများအား ထိုး​ပေးသွားမည်​ဖြစ်ပြီ၊ အလှူရှင်​ရှိသည်​ဖြစ်​​စေ မိမိအစီအစဉ်​နှင့်​ဖြစ်စေ မြ၀တီမြို့တွင်​​ နေထိုင်​သူများ အ​နေဖြင့်​ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်​​ကြောင်း ကာကွယ်​​ဆေးထိုးရာတွင် ​ပါဝင်​ခဲ့သူ ​မြန်မာနိုင်ငံလူမှု ကယ်ဆယ်ရေးအသင်း (မြ၀တီ) မှ ဒေါက်​တာ ကိုကို​အောင်​က ​ပြောကြားသည်​။
မြ၀တီမြို့အနီး​ သောင်​ရင်းတစ်ဖက်ကမ်းရှိ မဲ​ဆောက်​မြို့​နေသူများမှာ ​နှစ်​စဉ်​ ဧပြီ၊ ​မေလတို့တွင်​ ရာသီတုပ်​​ကွေး H1N1 ကာကွယ်​​ဆေးများ ထိုး​လေ့ရှိ​ကြောင်း မဲ​ဆောက်​မြို့၌​နေထိုင်​သူ ကိုကြီးမန်းက ​ဆိုသည်​။
ကရင်​ပြည်​နယ်​ နယ်​ခြား​စောင့်တပ်​ (တပ်​နယ်​ ၃) မှ ဗိုလ်​မှူးခင်​​မောင်​၀င်း၊ မူလွန်​မဲ့ပလဲ့​ ကျောင်းမှ ဆရာစိုင်း​မောင်​​ထွေးတို့သည်​ ဒေါက်တာကိုကိုအောင်​နှင့်​အတူ မူလွန်​မဲ့ပလဲ့​ကျောင်းရှိ ဆရာ/မများကိုလည်း​ကောင်း၊ ဦးခွန်​ချစ်​စံ ဦးဆောင်​​သော မဲ့ပလဲ့​ကျေးလက်​ ကျန်းမာ​ရေးဌာန၀န်​ထမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ စာသင်​​ကျောင်းရှိ ဆရာ/မများကိုလည်း​ကောင်း၊ ဦး​စောဖိုးထူးဦး​ဆောင်​​သော ​ဝှေ့ရှမ်းကျေးလက် ​ကျန်းမာ​ရေးဌာန၀န်​ထမ်းများကိုလည်း​ကောင်း၊ ဆရာမကြီး ​ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်​ ဦး​ဆောင်​​သော ​ဝှေ့ရှမ်းအထက (ခွဲ)​ ကျောင်းနှင့်​ဝန်းကျင်​ရှိ ဆရာ/မများကိုလည်း​ကောင်း၊ ဦး​ဇေယျာစိုး (တာဝန်​ခံ) ဦး​ဆောင်​​သော သင်္ဃန်းညီ​နောင်​​ကျောင်းရှိ ဆရာ/မများကိုလည်း​ကောင်း၊ ​ဒေါ်တင်​တင်​​ထွေး ဦး​ဆောင်​​သော သင်္ဃန်းညီ​နောင်​ရှိ ကျန်းမာ​ရေးဌာန၀န်​ထမ်းများကိုလည်း​ကောင်း၊ သင်္ဃန်းညီ​နောင်​ အ​ခြေချစစ်​​ဗျူဟာ ​ဗိုလ်​ကြီး​သန့်​ဇင်​ထူး ဦးဆောင်​​သော အရာရှိတို့ကိုလည်း​ကောင်း H1N1 ရာသီတုပ်​​ကွေး ကာကွယ်​​ဆေးများ ထိုးနှံ​ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်​။ ထို့အပြင်​ စာသင်​​ကျောင်းများရှိ က​လေးများအတွက် Hand Sanitizer များ၊ နှာ​​​စေး​ချောင်းဆိုးလျှင်​ အသုံးပြုနိုင်သည့် တစ်ခါသုံး Tissue များနှင့်​ Mask များပါ ပေးအပ်​လှူဒါန်းမှုများ ပြုခဲ့ကြသည်​။
ထိုင်းနိုင်​ငံ မဲ​ဆောက်​မြို့ အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ ဆေးရုံတွင်​ ကြိုတင်​စာရင်း​ပေးငွေသွင်းပြီး H1N1 ကာကွယ်​​ဆေးကိုလည်း မြ၀တီမြို့​နေသူများ ​နေ့စဉ်​ရာနှင့်​ချီ၍ သွား​ရောက်​ထိုးနှံလျက်​ရှိသည်။
Writer : ရွှေသိန်း (မြ၀တီ)
Posted in Headline, NewsTagged H1N1LeaveaComment on မြန်​မာ-ထိုင်းနယ်​စပ်​ မြ၀တီမြို့မှ ​ဒေသခံပြည်​သူအချို့ ထိုင်းနိုင်​ငံ မဲ​ဆောက်​ဘက်​သို့ ရာသီတုပ်​​ကွေး A(H1N1) ကာကွယ်​​ဆေး သွား​ရောက်​ထိုးသူ များပြားခဲ့သလို အလှူရှင်​များက အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ ​ဆေးရုံမှမှာယူပြီး မြ၀တီမြို့တွင် ကာကွယ်​​ဆေးထိုး​ပေးနေ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ ရေးရရှိရေး၊ ပညာရေးနှင့် မြေယာပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးရေးတို့ကို အဓိကဆွေးနွေး
Posted on August 7, 2017 December 10, 2017 by Htike Aung
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းကို သြဂုတ် ၇ ရက်က ၀မ်းတွင်းမြို့နယ် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာ၌ ပြုလုပ်စဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဌေးလှအောင်)
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းကို သြဂုတ် ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက မိတ္ထီလာခရိုင် ၀မ်းတွင်းမြို့နယ် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းသို့ ကျေးရွာဒေသခံရှစ်ဦးတို့က တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်းအရာထက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကိုသာ ဒေသခံများက အဓိကတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင် အဆိုပါ ကျေးရွာဒေသခံဦးရဲစိန် (ကုန်ကားလုပ်ငန်းရှင်)၊ ဒေါ်ပိုးတီ (သီးနှံကုန်သည်ပွဲစား)၊ ဦးကျော်ဖုန်း (ဆန်စက်ပိုင်ရှင်) ဦးဝင်းဇော် (ရက်ကန်းရုံပိုင်ရှင်)၊ ဒေါ်ထက်ထက်အောင် (MBA ကျောင်းသူ)၊ ဦအောင်တင့် (တောင်သူ)၊ ဒေါ်ခင်ဆွေ (ကုန်မျိုးစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်)၊ ဦးထွန်းဝင်း (ကျောင်းဆရာ) အစရှိသည့် ဒေသခံရှစ်ဦးတို့က တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့သိုိ့ဆွေးနွေးရာတွင် ဒေသခံများမှ ယင်းတို့ဒေသတွင်း လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိရေး၊ မြေယာပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အစရှိသည့် အချက်များကို အဓိကတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သြဂုတ် ၇ ရက်က ၀မ်းတွင်းမြို့နယ် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဆိုပါ ကျေးရွာရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုဘိုးဘွားများအား ကနဦးတွေ့ဆုံ ဂါရ၀ပြုခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မ ဒီကိုလာရတယ်ဆိုတာက တစ်ခုက ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီရွာကိုရွေးရလဲဆိုတော့ မကြာသေးခင် ကာလတုန်းက လျှပ်စစ်မီး ဒီရွာမှာသွယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုလျှပ်စစ်မီး သွယ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဘ၀တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲ။ လျှပ်စစ်မီးမရင်ခင်နဲ့ရပြီး အချိန်တွေမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာ အဲဒါကို ကျွန်မတို့ သိချင်ပါတယ်။ ရွာတစ်ရွာရဲ့အခြေအနေဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အခြေအနေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့က အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တန်းတူအရေးကြီးတာက ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီမိတ္ထီလာမြို့နယ်ဘက်က၊ မန္တလေးတိုင်းဘက်က သိချင်မှသိကြမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီနေရာတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး ရှိနေတာကြာပြီဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိခြင်းရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံကို သိပ်ပြီးမသိကြဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ နှလုံးသွင်းစေချင်ပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းလုပ်မှ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းမှာပါ” ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အစိုးရအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးမရရှိသေးသည်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်ရန်မရှိကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသည်မှာ အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ဒီကနေ့ အမေစုနဲ့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိတာ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ အရမ်းပဲဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာက ဘွဲ့တစ်ခုရပြီးသွားရင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်အနေနဲ့ ရပ်တည်လို့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ပညာရေးစနစ်ကိုတော့ အရမ်းကြီးအားမရသေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဒေသမှာက ဆင်းရဲလို့ ပညာမသင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျောင်းတွေမှာဆိုရင် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပျံ့နှံ့နေတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ဒေသတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပညာသင်ကြားလို့ရတယ်။ သူတို့ဒေသမှာ အခက်အခဲတွေက အများကြီးဖြစ်နေတယ်။ အမေစုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်” ဟု မိတ္ထီလာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မထက်ထက်အောင်က ပြောကြားသည်။
၀မ်းတွင်းမြို့နယ် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သည့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းသို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးက ဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ကျောင်းဆရာနေရာမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဦးထွန်းဝင်းက ပညာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကာ မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာ မူလွန်ကျောင်းအဆောက်အအုံ လုံလောက်မှု မရှိခြင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူက ဆွေးနွေးရာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာမရှိခြင်းနှင့် ဘွဲ့ရရှိပြီးပါက အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် မလွယ်ကူသည့် အကြောင်းများကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကုန်ကားပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးရဲစိန်က မော်တော်ကား အရစ်ကျဝယ်ယူရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများနှင့် ပေးဆပ်ရသည့် အတိုးနှုန်းများကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်ဖုန်းက အသေးစားလုပ်ငန်းများ ချေးငွေရရှိမှု အခက်အခဲများနှင့် လုပ်ငန်းရပ်တည်ရန် အခက်အခဲများအား တင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများက ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသီးသီး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအပေါ် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့များအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ညွှန်ကြားပေးခဲ့ပြီး လတ်တလော ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အချက်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် အခမ်းအနားအပြီးတွင် ဒေသခံသုံးဦးကို မေးခွန်းမေးမြန်းခွင့်ပေးခဲ့ရာ ဒေသခံသုံးဦးက သိမ်းဆည်းခံမြေယာ ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းပေးရန်၊ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရန်အတွက် ငွေပေးဆောင်ထားသော်လည်း မီးလင်းနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများ၊ လတ်တလော စိုက်ပျိုးချိန်တွင် ရေရရှိရေးများအတွက် တင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ တင်ပြချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့များက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဒေသခံများအား မေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေသခံများက သိရှိမှုနည်းပါးကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများအား အစိုးရသတင်းဌာနများက ထုတ်ပြန်ပေးမှုများအား ပြည်သူများအနေဖြင့် ကြည်ရှုလေ့လာကြရန်အတွက် မှာကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း ပြုလုပ်သည့် မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာမှာ ၀မ်းတွင်းမြို့နှင့် ခုနစ်မိုင်ခန့်ကွာဝေး၍ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေးတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ ၂၇၀၊ လူဦးရေ ၁၂၀၀ ၀န်းကျင်ရှိကာ ငြိမ်းချမ်းသောဒေသဖြစ်ခြင်း၊ အရက်ဆိုင်လုံးဝမရှိခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားမရှိခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သွားလာရလွယ်ကူခြင်းနှင့် မကြာခင်ကာလက လျှပ်စစ်မီးရရှိထားခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကျေးလက်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစကားဝိုင်းသို့ မြေတိုင်ကန်ကျေးရွာမှ ကုန်သည်၊ ပွဲစား၊ တောင်သူ၊ ကျောင်းဆရာနှင့် ကျောင်သားစသည့်အလွှာစုံမှ လူပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးတို့က ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဒေသခံပြည်သူများကပညာရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ ရေရရှိရေး၊ မြေယာပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးရေးတို့အား တင်ပြခဲ့ကြကာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူများကို ညွှန်ကြားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေသခံပြည်သူရှစ်ဦးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးချိန်တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး Online စာမျက်နှာသို့ မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ကြသည့် ပြည်သူများ၏ မေးခွန်းများကိုလည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့သည့်အပြင် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ပရိသတ်များထဲမှ မေးခွန်းမေးမြန်းလိုသူသုံးဦး၏ မေးခွန်းအား ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
Writter : ဌေးလှအောင်၊ ၀ဏ္ဏ
Posted in Headline, PoliticsLeaveaComment on နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူများ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ ရေးရရှိရေး၊ ပညာရေးနှင့် မြေယာပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးရေးတို့ကို အဓိကဆွေးနွေး
ရေနက်ပိုင်းကမ်းလွန်လုပ်ကွက် A-6 ရှိ အကဲဖြတ်တွင်း ပြည်သစ် (၁) တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းလွန်ရှိ ရေနက်ပိုင်းကမ်းလွန် လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင် တူးဖော်ခဲ့သော အကဲဖြတ်တွင်း ပြည်သစ် (၁) တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတွင် သြဂုတ် ၇ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားရေးစာချုပ် (PSC) ချုပ်ဆို၍ အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေသော MPRLE & P Pte.Ltd နှင့် အခြားအစုရှယ်ယာရှင်များဖြစ်သော WoodSide Energy (Myanmar) Pte.Ltd နှင့် Total E&P Myanmar တို့သည် အကဲဖြတ်တွင်း ပြည်သစ် (၁) ကို ၂၀၁၇ ဇွန်တွင် စတင်တူးဖော်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ရည်မှန်းအနက် မီတာ ၄၅၇၀ အထိ တူးဖော်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တွင်းတူးဖော်စဉ် Wire Line Logging တိုင်းတာရရှိသော အချက်အလက်များအရ အနက် ၃၅၄၂ မီတာတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းနေသည့် အသားတင် ထုတ်ယူရမည့် သဲကြောအထူ ၃၅ မီတာခန့်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ ယင်းသဲကြောအား သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စမ်းသပ်ခြင်း (Drill Stem Test) ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ၅၀ ကုဗပေသန်းနှုန်း ထုတ်ယူရရှိခဲ့သည်ကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင် တူးဖော်ခဲ့သည့် ပြည်သာ(၁)တွင်းတွင် ပထမဆုံး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် တူးဖော်သည့် ဒုတိယတွင်း ရွှေရည်ထွန်း (၁) တွင်လည်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းနေသည့် သဲကြောကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခုပြည်သစ် (၁) တွင်းသည် တတိယအကြိမ်မြောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ နည်းနေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိသည့်သတင်းသည် စီးပွားရေးအရ အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ ယခုလုပ်ကွက်မှ ရေရှည်စီးပွားဖြစ် ထုတ်ယူနိုင်သည့် အလားအလာရှိကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
“အခုလို ကြေညာလိုက်တဲ့ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် A-6 မှာရှိတဲ့ပြည်သစ် (၁) နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရရှိမှုတွေက ဘူမိဗေဒသဘောတရား အရရော၊ ရေနံအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အရရော အခြေအနေကောင်းတယ်။ အလားအလာကောင်းတယ်။ ရေရှည်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတဲ့တွင်းလို့ ယေဘုယျအားဖြင့် သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ယေဘုယျလို့ဘာလို့ သုံးသပ်ရသလဲဆိုတော့ နောက်ထပ်တွင်းတွေ ထပ်တူးဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဒီဧရိယာမှာတူးတဲ့ သုံးတွင်းစလုံးက အောင်မြင်တယ်။ ရေနံလောကမှာ သုံးတွင်းတူးရင် သုံးတွင်းအောင်မြင်ဖို့က တော်တော်လေးရှားပါတယ်။ သုံးတွင်းတူးတာ သုံးတွင်းစလုံး အောင်တယ်ဆိုတာ ဒီဧရိယာမှာ ဓာတ်ငွေ့အလားအလာ တော်တော်လေးကောင်းတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောကြားသည်။
လုပ်ကွက်အမှတ် A-6 တွင် ဆက်လက်ပြီး ရှာဖွေရေးတွင်း ပြည်သာယာ (၁) ကို သြဂုတ်လအတွင်း ဆက်လက် တူးဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းမှုပမာဏသည် စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်းများ ဆက်လက်တူးဖော်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း MPRLE & P Pte.Ltd ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါလုပ်ကွက်မှ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ် ရောင်းချရန်အတွက် ရှာဖွေရေးတူးဖော်ရေး အဆင့်များစွာ ဆောင်ရွက်ရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် တတိယ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ အတည်ပြု သတ်မှတ်ပေးရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်ထုတ်ယူနိုင်ပါက ပြည်တွင်းကို ဦးစားပေးရောင်းချပြီး ပိုလျှံသော ဓာတ်ငွေ့များကို ပြည်ပသို့ ရောင်းချနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူကုမ္ပဏီများက စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အကဲဖြတ်တွင်းတွေ။ ရှာဖွေရေးတွင်းတွေ ဆက်တူးရပါမယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက် ပမာဏကို Third Party က Certify လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒီသဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်သည် စီးပွားဖြစ်ထုတ်လို့ရတဲ့ ပမာဏရှိပါပြီဆိုတဲ့ Certificate ရတော့မှ Development လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီး ပိုက်ဆွဲမလား၊ ဘယ်ကိုရောင်းမလဲဆိုတာ ပေါ်ပါတယ်” ဟု လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်ဦးက ပြောကြားသည်။
Writer : နေရိုင်း၊ ကျော်မျိုး
Posted in BusinessLeaveaComment on ရေနက်ပိုင်းကမ်းလွန်လုပ်ကွက် A-6 ရှိ အကဲဖြတ်တွင်း ပြည်သစ် (၁) တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ရှိကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်
Posted on August 7, 2017 August 8, 2017 by Htike Aung
ယနေ့သည် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး ၂၉ နှစ်ပြည့်မြောက်သောနေ့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် အငယ်ဆုံးလူငယ်များသည်ပင်လျှင် အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်ရှိကြပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအခါ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်စာတမ်းအချို့ ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရှေ့မျိုးဆက်က နောက်မျိုးဆက်အား လက်ဆင့်ကမ်း ပြောကြားခဲ့ကြသောကြောင့်လည်းကောင်း ယနေ့ခေတ် လူငယ်အများအပြား အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီးအကြောင်းကို သိသင့်သလောက် သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး၏ သမိုင်းကိုပြည့်စုံအောင် ရေးသားပြုစုထားခြင်းမရှိသေးပေ။ ၎င်းအပြင် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအား အမျိုးမျိုးပုံဖျက်ပြောဆိုခဲ့ကြသောကြောင့် နှောင်းလူများ တလွဲမှတ်ထားခဲ့ကြသူများလည်းရှိနိုင်သည်။
အမှန်တကယ်၌ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးသည် တစ်နိုင်ငံလုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ပါဝင်ခဲ့သော အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ပြိုင်နက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည့် ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးအရေးတော်ပုံကြီးဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကမျှ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်းကမျှ လှုံ့ဆော်ခဲ့သောကြောင့် အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ခါးသီးစွာ ကြိတ်မှိတ်ခံလာခဲ့ရသော ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး နိုးကြားလာကာ တညီတညွတ်တည်း ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွားအောင် အမှန်တကယ် လှုံ့ဆော်ခဲ့သောအရာမှာ ကြိတ်မှိတ်ခါးစည်းခံခဲ့ရသော ပြည်သူလူထု၏ ဒုက္ခတရားများနှင့် အာဏာရှိသူတို့၏ မတရားဖိနှိပ်မှုများသာဖြစ်သည်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် အကြီးဆုံး၊ အင်အားအများဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံး လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်စနစ်ကို ထိရောက်စွာ ထိုးနှက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် စစ်အာဏာရှင်များ ယာယီနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရသော အရေးတော်ပုံလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီးသည် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ပါတီများနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပနိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင်လည်း စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အစုအဖွဲ့များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ဖိနှိပ်မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏ ဒုက္ခတရားကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှ သိရှိသွားကြသည်မှာလည်း အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီးကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များနှင့် လက်နက်ကိုင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များ ဟန်ချက်ညီညီ စုစည်းညီညွတ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့် ယခုတိုင်မအောင်မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အဆိုပါအရေးတော်ပုံကြီးကြောင့်ပင် ယခုကဲ့သို့ အရပ်သားအစိုးရဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သော အစိုးရတစ်ရပ်ကား ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
အာဏာရှင်တို့၏ ဖိနှိပ်မှုများနှင့် မတရားမှုများကို ခေါင်းငုံ့မခံဘဲ စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် တွန်းလှန်ရဲသော စိတ်ဓာတ်သည် ရှစ်လေးလုံး စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ကို မျိုးဆက်အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းကာ လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းဖြင့် ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ် အဓွန့်ရှည်ပါစေဟု The Daily Eleven သတင်းစာက ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်
Posted in EditorialsLeaveaComment on ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ် အဓွန့်ရှည်ပါစေ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အိုးဘိုနှင့်အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်များမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သူ အကျဉ်းသားခုနစ်ဦးအား ပထမဆုံးအဖြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မန္တလေးအိုးဘိုထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများကို တာဝန်ရှိသူများက သြ၀ါဒပေးနေစဉ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် မန္တလေး အိုးဘိုထောင်နှင့် အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်သူ အကျဉ်းသား ခုနစ်ဦးအား သြဂုတ် ၇ ရက်က ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းထွန်းစိုးက ပြောကြားသည်။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့သူများမှာ မန္တလေးအိုးဘိုထောင်မှ သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်တစ်ဦးနှင့် တစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် လေးဦး၊ အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် နှစ်ဦးတို့ဖြစ်ပြီး ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၁၊ ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကျခံနေရသည့် သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မရွှန်းလဲ့ဝေကျော်၊ လူသေစေမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ကျခံနေရသည့် တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်ထွဋ်ခေါင်မြင့်အောင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ကျခံနေရသည့် တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်ဟိန်းထက်အောင်၊ မူးယစ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ရှစ်နှစ် ကျခံနေရသည့် တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်လှိုင်မင်းဦး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ကျခံနေရသည့် တစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မောင်အောင်ချမ်းမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူနှစ်ဦးတွင် ယခင်နှစ်က တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားသူ တစ်ဦးပါဝင်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူဖြစ်သည်။
“ဒီလိုဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်ပြီး လွှတ်ပေးတာ အရင်တုန်းက မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါက ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်” ဟု အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းထွန်းစိုးက ပြောကြားသည်။
“သမီးလုံးဝ ထင်မှတ်မထားပါဘူး။ ဂုဏ်ထူးမပါဘဲ ရိုးရိုးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့ အရမ်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ခုလိုသမီးတို့ ပညာဆက်သင်ခွင့်ရအောင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ သမ္မတကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မရွှန်းလဲ့ဝေကျော်က ပြောကြားသည်။
“သူတို့လေးတွေက ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ အပြင်မှာ ပညာသင်ကြားလို့လည်းရအောင် နောက်ပြီးတော့ အကျဉ်းထောင်ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်း လိုက်နာတာပေါ့” ဟု အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်၊ တာဝန်ခံအရာရှိ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးဦးက ပြောကြားသည်။
အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သော အကျဉ်းသားကိုးဦးနှင့် စာသင်ကြားပေးသော ဆရာ၊ ဆရာမများအား ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က အင်းစိန် ဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Writer : အောင်မျိုးသန့်၊ ယဉ်မျိုးသွယ်
Posted in Headline, NewsLeaveaComment on နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် အိုးဘိုနှင့်အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်များမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သူ အကျဉ်းသားခုနစ်ဦးအား ပထမဆုံးအဖြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများ အပါအ၀င် ခြောက်ဦးအမှုမှ လွတ်မြောက်နေသူအား ရှာဖွေဖမ်းဆီးရန် တရားသူကြီး ညွန်ကြား
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများ အပါအ၀င် ခြောက်ဦးအမှုမှ လွတ်မြောက်နေသူအား ရှာဖွေဖမ်းဆီးရန် တရားသူကြီးက ညွန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုကို သြဂုတ် ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လွတ်မြောက်နေသည့် ဦးကျော်ရဲသွေးဆိုသူကို နေထိုင်သည့် နေရာတွင် ရှာဖွေရာမတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားရုံးသို့ တင်ပြသဖြင့် တရားသူကြီးက ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ခြေရှိသည့်နေရာများတွင် ရှာဖွေဖမ်းဆီးရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီနေ့မှာတော့ ကျော်ရဲသွေးရှိတဲ့နေရာကိုရှာဖို့ ဖမ်းဝရမ်းပြန်သွင်းဖို့ လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ ကျော်ရဲသွေးနေထိုင်တဲ့ အရပ်ဒေသမှာ တာဝန်အရ သွားဆောင်ရွက်တဲ့ရဲကို စစ်ဆေးတယ်။ ဒါကို မင်နီသက်သေလို့ခေါ်တယ်။ မင်နီသက်သေကို စစ်ဆေးပြီးတော့ ရုံးချိန်းကတော့ ၂၁ ရက်ကို ပြန်ပြီးတော့ ချိန်းတယ်။ ကျော်ရဲသွေးရှိတဲ့နေရာကို မော်လိုက်ခရိုင်မှာ တာဝန်ကျတယ်လို့ပြောလို့ ၀ရမ်းသွားမယ်။ အဲဒီဝရမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ သွင်းရမယ်” ဟု စွပ်စွဲခံရသူများဘက်မှ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးချစ်ကိုကိုက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအမှုမှ တရားစွဲခံထားရသူ ခြောက်ဦးအနက် ဖမ်းဆီးရမိထားသူ ငါးဦးအား ရာဇသတ်ကြီး အမှုအမှတ် ၃/၂၀၁၇၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၅၆/ ၆၃၊ ဖမ်းမမိသေးသည့် ဦးကျော်ရဲသွေးဆိုသူကို ရာဇ၀တ်အထွေထွေအမှုအမှတ် ၁/၂၀၁၇၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၅၆/ ၆၃၊ ကျင့်-၅၁၂ တို့ဖြင့် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်မှ သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြေကွက်တစ်ကွက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိန်းထောင်ဖြင့် ချီသောအဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အထင်အရှား ပေါ်ပေါက်သည့်အတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာန၊ ကရင်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးပြုံးချို (ယခင်က ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန) ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ကျော်ဇေယျ (ယခင်ဝန်ကြီးရုံး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန)၊ စစ်ကိုင်းခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးခိုင် (ယခင်ဝန်ကြီးရုံး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန)၊ မော်လိုက်ခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ရဲသွေး (ယခင်ဝန်ကြီးရုံး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန)၊ အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီး ဦးနေမျိုးထွန်း (မြေပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)နှင့် ဦးကျော်နိုင်စိုး (မြေပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) စုစုပေါင်း ခြောက်ဦးအား အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိန်တင်က တရားလိုပြုလုပ်ကာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆/ ၆၃ ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လာမည့်ရုံးချိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရား လွှတ်တော်၌ သြဂုတ် ၂၁ ရက်တွင် ချိန်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
Writer : နေမျိုးဝင်း၊ မျိုးထက်ပိုင်
Posted in NewsLeaveaComment on အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများ အပါအ၀င် ခြောက်ဦးအမှုမှ လွတ်မြောက်နေသူအား ရှာဖွေဖမ်းဆီးရန် တရားသူကြီး ညွန်ကြား
အကြိမ် (၇၀) မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို မုဒုံမြို့နယ် ၀င်းစိန်တောရ ပရ၀ုဏ်တွင် ကျင်းပရာ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ မွန်သံဃာ၊ လူငယ် ၂၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်
အကြိမ် (၇၀) မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ (ဗဟို) ကို မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့နယ် ၀င်းစိန်တောရပရ၀ုဏ်ရှိ မွန်အာဇာနည်ကုန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ မွန်သံဃာနှင့် လူငယ်များ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ရာ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ကျင်းပသည့် (၁၀) ကြိမ်တွင် ယခုအကြိမ်သည် တက်ရောက်သူ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိသည်။
“နှစ်စဉ်လာတက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ တက်တဲ့သူတွေ အများဆုံးဖြစ်သလို၊ မွန်လူငယ်တွေ အများဆုံးလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဆက်သွယ်မှု မီဒီယာအားကောင်းလို့လည်းဖြစ်မယ်။ လူငယ်တွေက နိုင်ငံတကာက လူငယ်တွေလို၊ အနာဂတ်မွန်ပြည်နယ်အတွက် အခုလို တပေါင်းစုတည်း လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုး ဆောင်လာလို့ပဲဆိုရမယ်” ဟု မွန်တိုင်းရင်းသားအရေး လှုပ်ရှားသူ သံလွင်တံတားအမည် ပြောင်းလဲရေးကော်မတီမှ နိုင်မွန်ရာဇာက ပြောကြားသည်။
“အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ့်လူတွေပါပဲ၊ သူတို့အတွက် သမိုင်းမှာ ဘယ်လိုရှိလာသလဲ၊ ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွက် လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ လွတ်လပ်မှုရအောင်၊ ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ၊ အဆင့်ဆင့်အချင်းချင်း ကြိုးစားပြီး ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ထဲမှာ မွန်လူမျိုးက အထူးခြားဆုံးတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်။ ကွဲနေတာက မကောင်းဘူး။ တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒီပွဲကိုတက်လာကြတဲ့သူတွေ၊ လူငယ်တွေအားလုံး တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် စိတ်ဓာတ်မြင့်သွားပို့ပါပဲ၊ ကျွန်မတို့က ဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်။ ဒီမိုကရေစီက အဓိကရည်ရွယ်ချက် သုံးချက်ရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိမယ်။ တန်းတူရေးရှိမယ်။ စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုရှိမယ်။ ဒါကိုရမှ ကျွန်မတို့လူမျိုးတွက် စစ်မှန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ့်ရဲ့မူအရ အကုန်လုံး လုပ်ဆောင်ခွင့်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေမရသရွေ့ မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ကို နှစ်တိုင်းလုပ်နေမယ်” ဟု အကြိမ် (၇၀) မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ကော်မတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မိစန္ဒာနွန်က ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြည်တွင်း၌ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကျင်းပခွင့်ရသည့်အတွက် ၀မ်းသာမိပါကြောင်း၊ လက်ရှိမွန်ပါတီများ ကွဲပြားနေမှုထက် တစ်ပါတီတည်း လုပ်ဆောင်သွားပါက၊ မွန်တို့အရေးကို ညီညွတ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်မှ တက်ရောက်လာသူ မင်းချမ်းအေးက ပြောကြားသည်။
အကြိမ် (၇၀) မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် မွန်လူငယ်ဘင်ခရာအဖွဲ့ ချီတက်အလေးပြုခြင်း၊ အလံတော်ကို အလေးပြုပြီး ကျဆုံးလေပြီးသော မွန်အာဇာနည်များကို အလေးပြုခြင်း၊ မွန်အာဇာနည်နေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဟောပြောခြင်း၊ ကော်မတီ၏ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ဖတ်ကြားခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကာ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Writer : မောင်မောင်ရွှေမြိုင်
Posted in NewsLeaveaComment on အကြိမ် (၇၀) မြောက် မွန်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို မုဒုံမြို့နယ် ၀င်းစိန်တောရ ပရ၀ုဏ်တွင် ကျင်းပရာ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ မွန်သံဃာ၊ လူငယ် ၂၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်